eReaders uye ebook: Zvese nezvekuverenga kwedhijitari uye kuverenga kwemagetsi | MaReaders ese
Vaverengi: vaverengi vemagetsi
Isu tiri vamwe webhusaiti yakasarudzika mune vanoverenga uye kuverenga kwedhijitari. Isu tinoongorora uye kuyedza ese mamodheru anowanikwa pamusika uye isu tinokuudza iwe nezve kwavo kusimba uye kusasimba.
Mubvunzo wekare. Kana iwe uchida kunanga kune iyo poindi, tinokurudzira 2.
Kana iwe uchida kuve unofambirana, idzi ndidzo nhau dzichangoburwa dzatinoburitsa idzi ndidzo nhau dzichangoburwa kubva kumakemikari mumusika uye nenyika ye kudhinda kwedhijitari uye kuverenga mune zvemagetsi fomati.
Kindle Paperwhite (2021) - Ongorora
SPC Dickens Chiedza Pro - Yakanaka isingadhure imwe nzira [Ongororo]
Kobo Sage, bheti ine mabhuku ekuteerera uye chinyoreso [Analysis]
Ongororo yezvinhu zvese
Isu tinoedza uye isu tinoongorora yega yega e-kuverenga zvakakwana, kwemavhiki, kuti ndikuudze iwe chiitiko chaicho chekushandisa yega yega zvishandiso zvakaita.
Pfungwa yedu yakasimba ndeyekuti takaedza zvakawanda zvekuti tinogona kuzvienzanisa nekukuudza kusimba uye kushaya simba kweumwe neumwe uchienzaniswa nemakwikwi awo.
Amazon Kindle, makambani, vaverengi, Hardware
Zvese nezveAmazon uye yako Kindle
Izvo hazvirambwe izvo Iwo Mhando nhasi ndiwo mano anonyanya kushandiswa nevaverengi. Saka tinokusiira izvi Kindle yakakosha, ine zvakawanda zvekudzidzisa uye manomano kuitira kuti iwe ugone kuwana zvakanyanyisa kubva kuAmazon ebook rako.
Kindle Oasis, ikozvino ne ...
Kana iwe uri kutsvaga kutenga anoverenga iwo ruzivo runotevera pamwe neiyo ereaders kuenzanisa ichakubatsira
Wakanakisisa muverengi muhunhu - mutengo
Kana tikataura nezvekukosha kwemari, isu tinoramba tichikurudzira iyo Kindle Paperwhite seyakanakisisa kuverenga
Kana iwe uchida kuongorora ayo anonakidza mamodheru ari pamusika izvozvi, tarisa iwo atinokurudzira
Kuenzaniswa kweakanakisa eReaders
Ndangariro / Inowedzerwa
Kindle Paperwhite 6" 300dpi Hongu Hongu 4Gb / Kwete 129.99 €
Kobo Aura H2O 6'8 " 300dpi Hongu Hongu 4Gb / Hongu 201 €
SonyPRS-T3 Size 300dpi Aihwa Hongu 2Gb / Hongu 222 €
mutsa 4 6" 166dpi Aihwa Hongu 4GbNha 79.99 €
Kobo Aura Mumwe Size 300dpi Hongu Hongu 8Gb / Hongu 227 €
Bq Cervantes 3 6" 300dpi Hongu Hongu 8Gb / hongu 139.90 €
Kindle Voyage 6" 300dpi Hongu Hongu 4Gb / Kwete 189.99 €
Kindle Oasis 6" 300dpi Hongu Hongu 4Gb / Kwete 289.99 €
Chii chakakosha mu ereader / ebook
Makore achifamba uye vaverengi vari kuwedzera kubatanidzwa uye kuvandudzwa michina.Maitiro ayo makore apfuura takaongorora kusarudza kuti e-reader yekutenga yashanduka. Saka nhasi kuvhenekesa chinenge chisungo, nepo makore mashoma apfuura isu hatina kufungidzira kuti zvinogona kudaro.
Saka, chii chatinofanira kutsvaga mu2019 kana tichida kutenga kana kusarudza anoverenga?
Sezvazviri mune zvese, isu tinofanirwa kugara tichifunga izvo chinangwa chatinoda kuchipa icho.
Screen saizi uye resolution
Saizi rekuyera revadzidzi vekare vagara vari 6 ″ uye mazhinji emhando dzazvino anoenderera nehukuru ihwohwo. Asi pane akawanda matsva ereaders, ane 8 uye 10 ″ skrini.
Muverengi 6 anokwanisa kugadziriswa uye nyore kutakura. inorema zvishoma kana tichiibata. Asi iyo gumi ″ kana tikasatakura inotipa chiitiko chinonakidza kwazvo.
Kana zviri zvekugadziriswa izvozvi vaverengi vemberi vanoshanda ne300 dpi (pixels pa inch) uye zvimwe zvimwe zvakakosha zvine 166 dpi. Mune ino kesi inowedzera zvirinani nekuti isu tinowana irinani tsananguro
Icho ndicho chazvino ficha kana mashandiro akawedzerwa kune e-kuverenga. Inogona kuita mutsauko mukutenga kwako. Kuvhenekera kwakashata kunogadzira mimvuri uye kukupa iwe wakashata kuverenga ruzivo.
Vaverengi vane mwenje vauya kuzogara, zvakanaka vakauya nguva refu yapfuura, asi ikozvino chero ebook rekutanga ratove naro. Iwo makuru maBrand akaiisa nekumisikidza uye zvidiki zvekukwikwidza vanga vasina imwe sarudzo kunze kwekuzviisawo mune yavo yese mamodheru.
Kuvhenekera ndechimwe chezvinhu zvinoita kuti ereader bhatiri hupenyu hupfupi.
Padanho rekushandisa, ivo vanosiyaniswa muzvikwata zviviri, izvo zvine yavo software uye izvo zviri kushandisa Android, chinova chimwe chezviitiko zvazvino uno izvo mabara mazhinji ari kujoina.
Kusvika parizvino muverengi mumwe nemumwe achishanda neayo ega software, iyo Kindle naKobo yakanyoroveswa uye vane hushamwari uye vanoziva kwazvo. Asi kwenguva yakati uye kunyanya mumabhuruku asingazivikanwe ivo vatanga kushandisa Android inovabvumidza (kana vachimhanya nemazvo) kubata mabhii makuru mune izvi.
Zvakanakira Android mune anoverenga akati wandei:
Tinogona kuisa nhamba huru yezvikumbiro zvinowedzera mabasa uye mikana yemuverengi wedu. Kuverenga uye Kuiverenga gare gare kunyorera seGetpocket, Instapaper, nezvimwe. Isu tinogona kunyange kuisa iyo Kindle uye Kobo maapplication uye nekuwana maakaunzi edu pane aya mapuratifomu.
Chatinofanira kungwarira nacho kutsetsenura. Andorid in muverengi ane simba shoma, vanoenda kumajezi uye vanogadzira chiitiko chisingafadzi kwatiri.
Asi iro ramangwana remhando dzakawanda richave riine Android kuti vakwanise kukwikwidza neakakura.
Iwo maBrand makuru kana tichitaura nezvevaverengi, iwo anomiririra mhando yavo uye ecosystem Amazon Kindle y Kobo naRakuten.
Ikozve kune akawanda akawanda Nook, Tagus, Toya, BQ, Sony, Likbook, Onyx. Tine zvikamu zvakakosha zveumwe neumwe wavo uye tinoda kuti iwe uone kuti chimwe nechimwe chavo chingakupa chii.